Kheyre “ Waa ay dhamaatay waqtigii La dhici Jiray Hantida Soomaaliya ‘’
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa Sheegay in ay Diyaar uyihiin Sahacabka Soomaaliyeed in ay La xisaabtamaan Dowladiisa oo ay Ugu Horeeyaan isaga Madaxweyne Farmaajo si ay iyagana ula Xisaabtamaan Shaqaalaha Kale ee Dowlada.
Dhanka kale Xasan Cali Kheyre Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay in Dhibaato kasto oo ku timaada Shacabka Soomaaliyeed ay la qeyb san doon read more... MUQDISHO : Wasiirka Arimaha Dibada UK ayaa soo gaaray
Wasiirka Arrimaha Dibadda Wadanka Ingiriiska ayaa Maanta Arbaca ah soo gaaray Magaaalada MuQdisho.
Boris Johnson inta uu Magaaladda Muqdisho ku sugan yahay waxa uu la kulmi doonaa Madaxda Dowlada Federaalka Soomaaliya iyo Ra’iisulwasaare Xasan Maxamed Khayre.
Waxyaabaha la filayaa in Madaxda Dowlada iyo Xoghayaha Arrimaha Dibadda Wadanka Ingiriiska ay wada hadlaan ayaa ah arimaha amaanka iyo abaaraha ka jira dalka. read more... Ciidamo Nato oo xoog ku soo furanaya Markab lagu afduubtay Puntland
Ciidanka Nato ee ku sugan xeebaha Puntland ayaa u dhaqaaqay Degaanka Caluula ee Gobolka Bari halkaas oo lagu qafaashay markab shidaal shiday oo ka dulbabanayay calanka Imaraadka Carabta.
Markabka ayaa la sheegay in ay afduubteen Kaluumaysato ku sugan Degaankaas kuwaas oo ka cabanayay waayadan Maraakiib dhibaato ku haysa Shabaakadahooda.
Maamulka Puntland ayaa shalay sheegay in ay qaadi doonaan talaabo kasta oo ay ku badbaadinayaan Markabkan la afduubtay. read more... Ahlu Sunna oo Ogol Filinta Heshiisyada ay la galaan Farmaajo
Shaakir waxa uu xusay in intii uu Magaalada Muqdisho uu ku sugnaa wada hadal wax ku ool ah uu la galay Madaxda Dowlada Federaalka Soomaaliya. read more... GUDIGA ABAARAHA : Walwal ayay nagu haysaa abaarta dalka ka jirta
Guddiga abaaraha Qaran ayaa sheegtay in ay sii kordhayso baaxada abaarta ka jirta Gobolada qaar ee dalka.
Shiikh Bashiir Axmed Salaad waxa uu hoosta ka xariiqay in wali ay maqlayaan dhawaaq xanuun badan oo kaga imaanaya dadka abuurtu ay ciirtaysay.
Abaarta ka jirta dalka ayaa galaafatay Nolosha dad badan , waxana sidoo kale ku baqtiyay xoolihii ugu badnaa. read more... 123..............165316541655Next » Special Info